ဒါဖတ်ပြီးမှ Facebook သုံးပါ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဒါဖတ်ပြီးမှ Facebook သုံးပါ…။
ဒါဖတ်ပြီးမှ Facebook သုံးပါ…။
Posted by black chaw on Jun 27, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Facebook, Society & Lifestyle | 18 comments
Facebook ပေါ်တက် ဂေါ်လီလုပ်မယ်ဆိုရင်…၊
ဒါဖတ်ပြီးမှ ဂေါ်လီလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပရစေခင်ဗျာ…။
အောက်မှာပါတဲ့ ပို့စ်ကတော့ ရှင် ဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အကြည်တော် ရဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာထဲက တောဂေါ်လီကြီးများအတွက် Facebook လမ်းညွှန်လို့တောင် ပြောလို့ရပါသည်။
ကော်ပီတွေအရမ်းများနေလို့ စာရေးချင်စိတ်ကုန်ခမ်းနေတာနဲ့ ဒါလေးကို ကိုယ်တိုင်စာစီစာရိုက်လုပ်
ယခု ဆက်လက်ပြီး ရေးသားပြမည်က အွန်လိုင်းပေါ်မှ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အမှန်များဖြစ်သည်။
ထိုစကားလုံးများသည် မြန်မာစာရေးထုံး နှင့် လွဲကောင်းလွဲနေပေလိမ့်မည်။ သို့သော် Facebook ပေါ်မှ စာလုံးပေါင်းကို
မသိပါက သင်သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လူရာမ၀င်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှ ရေးထုံးများကို သင်အမှန်တကယ်
ဥပမာဆိုရသော် Facebook ကိုပင် လိုင်းပေါ်တွင် အပြည့်မရေးရပါ။ Fb ဟုရေးရပါမည်။
Friend ကိုလည်း Fri ဟုသာ ရေးသားရမည်။
ဥပမာဆိုရသော် ကိုယ်မသိသောကိစ္စကို “ကျွန်တော်မသိဘူး” “ကျွန်မမသိဘူး” ဟုရေးသော် ခေတ်မမီ။
စာလုံးပေါင်းမှား၏။ စာလုံးပေါင်းအမှန်မှာ “တားတားတိဝူး” “မီးမီးတိဝူး” ဟူ၍ ရေးမှ မှန်ပေလိမ့်မည်။
သင်တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်စွာဖြင့်ရေရွတ်ပါက “ဟာဗျာ” ဟု မရေရွတ်ရ။ မရေးရ။ သင်စာလုံးပေါင်း
မကျွမ်းကျင်ကြောင်း လူသိကုန်ပေမည်။ “ဟာဗျာ” အစား “ဟာဂျာ” ဟု ရေးရပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် “မပြောချင်နေ”
ဆိုသည်ကို “ကျောချင်နေ” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ပြောပြ” ကို “ကျောကျ” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ချစ်စရာလေး” မြင်ပါက
“ချစ်ချာယေး”၊ မိမိကို “သူများ” ဟု သုံးချင်ပါက “သများ” ဟု သုံးပါမှ အဆင့်မြင့်မည်။
မိမိမသိသောသူကို မေးချင်ပါက “ဘယ်သူလဲ” ဟု မေးကားထောက်၏။ “ဘူရေးယဲ” ဟုမေးမှ မြောက်၏။
“စားပြီးပြီလား” မမေးရ။ “ချားပီးယား” ဟုမေးရ၏။ ဂုဏ်ယူချင်ပါက “ငါကွ ဘယ်သူထင်လို့လဲ” မရေးရ။ “နာကွ ဘူထင်ရဲ”
ဟု ရေးရ၏။ “ဘ၀” ဆိုသော စကားသုံးသော် မှား၏။ သုံးလိုသော “ဘွ” ဟုသာ တစ်လုံးတည်း သုံးရ၏။ “သွား”
ဆိုသည့်စကားအစား “တွား” ဟု သုံးရမည်။ “ထမင်းစားပြီးပြီလား” ကိုလည်း “မင်းချားပြီးလား” ဟု သုံးရပါသည်။
“ချစ်ချာယေး” ၏ နောက်တွင် ပိုလေးနက်စေလိုပါက “မွမွမွ” ကပ်သုံးရပါသည်။ တစ်ခုခုကိုညွှန်းချင်လျှင် “ဟိုဟာက” ဟူသော်
ရှည်၏။ “ဟွာက” ဟု သုံးက အဆင်လည်းပြေ အဆင့်လည်းမြင့်၏။
ပြီးလျှင် အဓိပ္ပါယ်ပေါ်သော ဓါတ်ပုံများဆောင်ထားရမည်။ ရံဖန်ရံခါ၌ စာရိုက်ရတာကြာမည်ထင်သော်
“အဲဒါမျိုးတွေ ကြည့်လို့ကို မရဘူး” စာအသင့်ရေးပြီးသော ဓါတ်ပုံမျိုး၊ “လှလည်း မလှဘူး” “ဂွတ်မောနီး”
“ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ” “သေချာကြည့် ဒီမှာ မင်းအတွက် အရူးလက်မှတ်” “လိမ်လိမ်မာမာနေနော်” စသည်ဖြင့်
အသင့်အသုံးပြုနိုင်သော ဓါတ်ပုံများ ဆောင်ထားရပေမည်။
ထို့အပြင် Facebook အသုံးပြုသူသည် ကိုယ်ပိုင် ဒိုင်ကြောင်များလည်း ကျွမ်းကျင်ရပေမည်။
ဥပမာအားဖြင့်… “လဲလျှင်ပြန်ထ၊ ဘယ်သူမှ ထူသူမရှိ၊ ကိုယ်တိုင်ပြန်ထူရ” ။
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှီ သင်ရေးလိုက်သော် သင်၏စာသားအောက်၌
“ဟုတ်ပ ညလေးရယ် မှန်လိုက်တာ”
စသော ကွန်းမန့်များ ပလူပျံလာပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါ…
“ကောင်းကင်အပြာကို အရောင်ဆိုးတိုင်း အဖြူရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့ နားမလည်နိုင်တဲ့ အသည်းနှလုံးကို
ပြာချပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ထဲ မျှောချချင်တယ်” စသည်ဖြင့် ဒိုင်ကြောင်များ လွှတ်ချလိုက်သော် သင်၏အောက်က
ဆိုသော ကွန်းမန့်များ တက်လာပေလိမ့်မည်။ ဒါကို သင်က ဆရာကြီးအထာဖြင့်…
တစ်ခုတော့ရှိသည်။ Facebook ပေါ်မှာ သူများကို ဆဲချင်သူများသည် သူတို့ဓါတ်ပုံများကို တင်မထားကြပါ။
(၁၅-၅-၂၀၁၄ ထုတ် ရှင် ဂျာနယ်မှ)
အာ့ဆို အဲ့လိုမပေါရင် ဖဘ သုံးလို့ ရဝူးပေါ့ညော်
အဲ့ တော်ကီတွေကို စပါယ်ရှယ် ကျင့်ထားရမှာပေါ့ညော်..
တားက မတိရို့ မေးဒါနော် ချိတ်ချိုးနဲ့
ပို့စ် အတွက်… ကျေးကျေး အမြှောက်တစ်သိန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မဟာမင်းလှ ဝဏ္ဏကျော်ထင် အော့ကြောလန် says:
ဆဲ ချင်ရင် ဘိုဆဲမဒုန်း
(CD to Rossi)
မိုက်ပါဝူးဂျာ…။ အကြည်တော်..တော်ကီဒွေ အပ်ပဒိတ်မဖြစ်တေးဝူးးးးးး
ပြာချပြီး ဂင်္ဂါမြစ်ထဲ မျှောချချင်တယ်”
ဒါတော့ တိဝူးးးးးးး အရောင်ဆိုးရင်တော့ အတော်ဆေးကုန်မယ်….။ ဂါဝန်ဘဲ ပေးဝတ်ပလိုက်မယ်..။ ဒါဘဲ ကောင်းဒယ်…။
သိစေချင်ရင် တည့်တည့် ကြေညာလိုက်။ အကောင်းပြောတာ။
ကြော်ငြာလို့မရသေးလို့ပေါ့ လူမိုက်မမရာ…။ မဟုတ်လို့ဂတော့လား…….ဓာတ်ပုံတွေ ဒချိပြီး ရွာပေါ် ၀င်အော်ပစ်မယ်…။ သိနေတယ်ဆိုရင်လဲ ကြုံရင် တွန်းဘာအူးးး. ကျေးဇူးဒွေမမေ့ဘာဘူး…။ ကျော့်သူငယ်ချင်း ၅၆ယောက်လုံး ပြန်ပေးမယ်…
ခုတော့ ကျော့်ကို ခြစ်ဒါ…။ ကျော်ရှိရင် မလာဘူးဆန္ဒပြထားလို့ ရွာပေါ်ကျော်ထင်တိုင်း ကလိနေဒါ..ညက်စိနောက်ရင် တီးခံဇမ်းဘာ…အပျိုကြီးဒွေ အာ့ခက်တာ..
ဒါ ဖတ်ပြီး ဆက် အိပ်လိုက်ပါဦးမည်
ပြီးလျှင် FB သွားပြီး တော်ကီပစ်ပါမည်
ဒီနေ့အတွက် နေသာထိုင်သာ ရှိတွားဘီ….
ကျေးဇူးးးး ယူ ပီ ဂျီ
ကျော့်သူငယ်ချင်း ၅၆ ယောက်ရှိဒယ်..
အနော့်မှာ စော်အလန်းယေးဒေချိဒယ် ယူဦးမား? ဒီနေ့ပဲ အကြည်တော်ရဲ့ Sexy Pose ကိုဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ် ရယ်လိုက်ရတာမှာ အခုချိန်ထိ အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားထိလို့မရသေးဘူး
လေးဘလက်ရေ… သများလည်း ဖေ့ဘွတ်မှာက ပေါလို့ရတယ်ဆိုပြီး.. တခါတလေပေါမိပါတယ်.. ကိုယ်ပေါတာတွေ.. ကိုယ့်သငယ်ချင်း နွားယူးဖိမှာသွားတက်နေတာကိုတော့အားနာသား.. သများပေါတာတွေ မကြည့်ချင်ရင်.. unfollow လုပ်ထားပါလို့.. အာ့ဆို..ဖရန့်လစ်ထဲရှိပေမယ့်.. လေးဘလက်တို့ဆီသွားမပေါ်တော့ဘူး.. ဟိ.. သများလည်း လုပ်ဖူးလို့..
ရေးပြီးပြန်ဖတ်တော့ ဟုတ်သေးဘူး.. သများရေးလိုက်ပုံက တမျိုးထင်စရာဖြစ်နေတယ်.. ဘိုလိုမှထင်ပါနဲ့နော်.. သများကလည်း ဘိုလိုသဘောမှမဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်ထဲအရင်ထဲကဖြစ်နေတာလေး ရေးမိတာပါ.. လေးဘလက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်..ဆောကတီး..
အူးးးဘလက် သားတို့တော့ အဲ့လို စကားလုံးတွေ သုံးပီးးး လန်းးးနိုင်ပါဘူးးဗျာ.. တစ်မိနစ် ၂ ကျပ် ၄ ကျပ်ပေးပီး အဝိုင်းလေးလည်တာကိုပဲ ကြည့်နေရတာ များလို့….။
ဟင့် FB မာ သများက ဖလမ်းဖလမ်းထမို့ဟာ အူးဘက်ပျော့ဒါနဲ့ သညားက ဂုချို တွားရဲဒေါ့ဝူးဟယ်။ လူဇိုး
​တော်​ပါ​တော့ဗျို့ ​ကော်​ပီအင်​​ပေ့စ်​​တွေချည့်​ပဲ ။ ကိုယ်​ပိုင်​ အ​တွေးနဲ့ အ​ရေး​လေးပဲ လုပ်​စမ်းပါဗျာ ။ ဒီမှာ ကိုဘလက်​ အချင်းချင်းမို့ ပြတ်​ပြတ်​ပဲ​ပြောမယ်​ သူများ​ယောင်​တိုင်းလိုက်​​မ​ယောင်​နဲ့ဗျာ ။